Iibhulogi zeendaba ezivela kwi-Foundation Reward: Uthando, iSondo kunye neInternet
Ikhaya Iibhulogi zeendaba
lawula888 1st Matshi 2021 Iindaba zamva
Le blog yeendwendwe nguJohn Carr, omnye wabasemagunyeni abakhokelayo kwihlabathi ekusetyenzisweni kwabantwana kunye nabantu abancinci kwi-intanethi kunye netekhnoloji entsha ehambelana nayo. Kuyo ubeka imeko enokubakho (etshabalalisayo) yesindululo sikaFacebook sokufihla…
Itheyibhile yokuqulathiweyo Ubhubhane Isishwankathelo seengozi ezingamanyala Ubunzima bobuntwana Autism Spectrum Disorders Iividiyo eziFutshane ekukhuseleni abantwana amaXwebhu amaNtsha ngabazali babazali malunga neZiphumo zePhonografi kuBantwana Ukunceda ngezo ngxoxo zinzima Iingcebiso eziphezulu zokuthetha nabantwana…
Uthando? Imfihlakalo. ” Kodwa inye indlela yokunceda ukuyichaza kungokuqonda iilwimi ezintlanu zothando. Sebenzisa esi sixhobo sobudlelwane ukuphucula ubomi bakho bothando. USuzi Brown, umcebisi wezemfundo kwiReward Foundation, ubeka apha ngezantsi indlela esinokuthi…
lawula888 9hi ngoFebruwari 2021 Iindaba zamva
Umba wobundlobongela obenziwa kwabasetyhini namantombazana kuluntu lwanamhlanje unzima kakhulu. Amanani obundlobongela basekhaya, ukungabulali kunye nokufa kwabantu ngokwesondo kunye nokuhlukunyezwa ngokwesini ngokubanzi kuyaqhubeka ukunyuka ngezinga elothusayo, ngakumbi ekutshixweni. Kubini kutshanje…
Kukho intetho eninzi kule minyaka idlulileyo malunga nokuba ukusetyenziswa kweendaba zosasazo (i-SMU) kunxibelelene nokudakumba. Olu phononongo lutsha kwiAmerican Journal of Preventive Medicine lubonisa ukuba kunokuba njalo. Sijonge ukusetyenziswa kweendaba zosasazo…
lawula888 4I Disemba 2020 Iindaba zamva
Rhoqo xa ndisebenza neentsapho, ndiqala ngokuxoxa ngempembelelo yomzimba yexesha lesikrini. Ixesha lesikrini eliguqulela njani kwiimpawu ezithile, kunye nendlela yokuphumeza isantya esandisiweyo se-elektroniki (okanye isikrini ngokukhawuleza) kunokunceda ukuseta kwakhona ingqondo kunye nokucacisa okwenzekayo. …
Uthando kunye namandla okuphulukisa okuphatha ayimfuneko kwimpilo yethu kuba isenza sizive sikhuselekile, sikhathalelwe kwaye singenaxinzelelo. Ugqibele nini ukuchukunyiswa? Ukufumanisa ngakumbi, i-BBC yenze uphando olubizwa ngokuba luVavanyo loChukumisayo koku…
"Kuzo zonke izinto ezenziwa kwi-intanethi, iphonografi inamandla okuba likhoboka," zitsho izazinzulu zaseDatshi uMeerkerk et al. Ngaphandle komthetho wokuqinisekisa ubudala kunye nomngcipheko wokutshixeka okungaphaya apho abantwana banoxanduva lokufikelela kwiisayithi ze-porn ngokukhululekileyo,…
Kwakothusa ukuva intombazana yesikolo eneminyaka eli-14 ubudala isazisa ukuba "ikink". Siphambi kwabanye abantu abancinci abangama-20 kwintetho malunga nobungozi obunokubakho kwi-intanethi ye-intanethi. Ibisele iyiminyaka emithathu…
lawula888 20I Julayi 2020 Iindaba zamva
Isiseko soMvuzo sichithe ihlobo lisebenza noJohn Carr, i-OBE, uNobhala woManyano lwaBantwana lwaBantwana lwase-UK kuKhuseleko lwe-Intanethi, ukuvelisa iNkomfa yokuQinisekiswa kweMinyaka yokuqala yoonografi. Wenzeka ngoJuni 2020. Lo msitho wawuquka…